Kooxo hubeysan oo laba weerar ka geysatay magaalooyinka Boosaaso iyo Gaalkacyo.
May 18, 2019 Osman Somalia, Wararka Maanta 2
Wararka naga soo gaaraya magaalooyinka Boosaaso iyo Gaalkacyo ee gobolada Bari iyo Mudug, ayaa sheegaya inuu ka dhacay laba weerar, kuwaasoo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
Weerarka koowaad, waxa uu galabta ka dhacay Boosaaso, waxaana lagu dilay Wiil dhalinyaro ah, kaasoo kamid ahaa 4,138 Arday oo saaka u fariistay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8-aad ee dowlad Goboleedka Puntland.
Marxuumka la dilay oo lagu magacaabi jiray Sulaymaan Maxamed Bootaan,waxaa dhexda u gashay rag Bistoolado ku hubeysan xili uu Soomanaa, isagoo wax ka baran jiray Iskuul lagu magacaabo Towfiiq oo ku yaalla magaalada Boosaaso.
Weerarka labaad, waxa uu isaguna Caawa ka dhacay magaalada Gaalkacyo dhinaca xigta Galmudug, waxaana dhaawac loogu geystay nin lagu magacaabo Axmed Qoodeeye oo ah Gudoonka Waxbarashada Gobolka Mudug ee Galmudug.
Majirto wali cid ay mamaulada Puntland iyo Galmudug u soo qabteen labada weerar, iyadoo todobaadyadii u danbeeyay ay dhowr weerar ka dhaceen magaalooyinka Gaalkacyo iyo Boosaaso.
A president on an international diplomatic marathon while his own region is facing its worst ever insecurity is of no use to anyone – neither the great citizens of Puntland nor the international diplomatic circles.
Nin Garoowe lag keeny xasil idiin samaynmaa ee Reer Boosaasow kuwa idin dilaaya ee idinla jooga iska qabta adinkoo dabin u dhigaaya Hal qof la qabto baa idinku filan waad ogaanaysaan kuwa idiin soo shaqo tagay